Tonga any Kildare - IntoKildare
Midira ao Kildare
Tsy mora kokoa na haingana kokoa ny fidirana mankany Kildare miaraka amin'ny rohy fitaterana isafidianana. Raha vantany vao tonga eto ianao, dia ampirisihinay hitety fiara na hitsangatsangana amin'ny fizahana rehetra hizaha. Na raha te hipetraka kely ianao dia hitarika anao any amin'ireo tanàna sy vohitra lehibe ny tambajotram-by sy ny bus mahazatra.
Manomana ny dianao
Aiza ihany koa i Kildare?
Tsy mahazatra ny jeografia irlandey? County Kildare dia eo amin'ny morontsiraka atsinanan'i Irlandy eo amoron'ny Dublin. Izy io koa dia mifanila amin'ny faritany Wicklow, Laois, Offaly, Meath ary Carlow ka eo afovoan'ny Atsinanana Fahiny any Irlandy.
Tanàna be olona, ​​tanàna kely feno olona, ​​tanàna ambanivohitra tsy misy fotony ary lalan-drano mahafinaritra, Kildare no toerana mety indrindra hankafizanao ny fiainana any Irlandy ambanivohitra ary koa ny asan'ireo tanàna lehibe kokoa.
Betsaka ny lalana azo isafidianana, i Irlandy sy i Kildare dia mora azon'ny rivotra. Misy seranam-piaramanidina iraisampirenena efatra any Irlandy - Dublin, Cork, Ireland West & Shannon - misy fifandraisana mivantana amin'ny sidina avy any Etazonia, Kanada, Moyen Orient, UK ary Eropa.
Ny seranam-piaramanidina akaiky indrindra amin'ny County Kildare dia seranam-piaramanidina Dublin. Ho an'ny fandaharam-potoanan'ny sidina ary tsidiho bebe kokoa ny fampahalalana dublinairport.com
Rehefa tonga ianao dia afaka mandray lamasinina, bus na manakarama fiara. Ny tambajotram-pifamoivoizana dia hitondra anao any Kildare vetivety!
Ny mitondra fiara dia fomba tsara hahitana ny zoro rehetra ao Kildare. Kildare dia mifamatotra tsara amin'ireo tanàna lehibe rehetra amin'ny alàlan'ny làlambe izay tsy dia mandany fotoana firy amin'ny fitsangatsanganana ary fotoana bebe kokoa hijerena!
Raha tsy te hitondra ny kodiaranao ianao dia misy safidin'ny orinasa mpanofana fiara ekena iraisam-pirenena hisafidianana Hertz ary View ary koa Dan Dooley, Europcar ary Enterprise. Ho an'ny karama fohy kokoa, serivisy fizarana fiara toy ny Mandehana fiara manolora taha isan’andro sy isan’ora. Misy ny fanofana fiara avy amin'ny seranam-piaramanidina lehibe sy tanàna rehetra - tadidio fa ny mitondra fiara any Irlandy dia eo ankavanan'ny làlana!
Avy amin'ny seranam-piaramanidina Dublin, Kildare dia tratra adiny iray latsaka amin'ny M50 sy M4 na M7, raha adiny roa monja avy eo Cork (amin'ny alàlan'ny M8) na ny seranam-piaramanidina Shannon (amin'ny alàlan'ny M7) dia mety ho eo afovoan'i Kildare ianao.
Raha te-handamina ny dianao mialoha dia mitsidika www.rsf-landland.ie ho an'ny zotra tsara indrindra sy ny fitetezana azo antoka.
Mipetraha, miala sasatra ary avelao ny olon-kafa hitondra fiara. Eurolines miasa matetika avy any Eropa sy Great Britain. Indray mandeha any Irlandy, Ataovy tsy am-pihambahambana, JJ Kavanagh ary Dublin Coach hitondra anao any Kildare avy eo afovoan-tanànan'i Dublin, seranam-piaramanidina Dublin, Cork, Killarney, Kilkenny, Limerick ary manodidina an'i Kildare.
Ny Irish Rail dia mitantana serivisy fiaran-dalamby isan'andro mankany sy avy any amin'ny tanàna lehibe indrindra, anisan'izany i Cork, Galway, Dublin ary Waterford. Mandehana mankany Kildare amin'ny lamasinina avy any Dublin Connolly na Heuston ao anatin'ny 35 minitra fotsiny.
Ny famandrihana mialoha dia asaina satria mety ho be atao ny serivisy. FITSIDIHANA Rail any Irlanda ho an'ny fandaharam-potoana feno sy hamandrihana.
Misy safidy serivisy mankany ary avy any Great Britain, France ary Spain izay soloin'i Ferry Irlandey, Fitaovana brittany ary Stena andalana.
Avy any Rosslare Europort sy Cork Port, ny toerana fialan-tsasatrao dia mora azo mandritra ny adiny roa amin'ny fiara. Ny seranan'i Dublin dia mifandray tsara ary hahatonga anao ho tonga any Kildare ao anatin'ny adiny iray amin'ny fiara, bus na lamasinina.
Rohy fitetezana mahasoa
Amin'ny alàlan'ny Air